Booliska Soomaaliya oo qabtay koox burcad ah | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Booliska Soomaaliya oo qabtay koox burcad ah
Booliska Soomaaliya oo qabtay koox burcad ah
Ciidamada Booliska Gobolka Banaadir ayaa howlgal ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho waxaay kusoo gacanta kusoo dhigeen Afar Dhalinyaro Burcad ah, oo xilliyada habeenkii dadka dhici jiray.
Saraakiil ka tirsan laamaha Amniga degmada Yaaqshiid ayaa dhankooda sheegay in ragga Burcadda ah ay ahaayeen kuwo dhibaato ku hayay Shacabka degmada, isla markaana ay ku wareejin doonaan Hay’adaha garsoorka dalka si loo Maxkamadeeyo.
Toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa dadka kunool degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir, ay ka cabanayeen Kooxo Burcad ah oo dhac u geeysanayay, iyadoo dhowr jeer howlgallo laga sameeyay degmooyinka Yaaashiid iyo Kaaraan lagu soo qabtay rag Burcad ah.
Previous articleMaxay tahay sababta lagala laabtay ciidamada GSU-da ee ilaalinayay hoyga Ruto?
Next articleMaleeshiyada Al-Shabaab oo sheegtay inay qabsadeen Bacaadweyne iyo Camaara